Ukukhuphuka Kokukhangisa Okususelwa Kubantu Nokukhangisa | Martech Zone
NgoMsombuluko, Ephreli 25, 2016 NgoMgqibelo, ngoFebhuwari 13, 2021 Douglas Karr
Emaphepheni abo ezimhlophe ku-People-Based Marketing, i-Atlas inikeza izibalo ezithokozisayo ku ukumaketha nokukhangisa okusekelwe kubantu. Ngenkathi sichitha isikhathi esithe xaxa kuselula yonke, abantu abangama-25% basebenzisa amadivayisi ama-3 noma ngaphezulu ngosuku, futhi abantu abangu-40% bashintsha amadivayisi ukuqedela umsebenzi
Kuyini ukumaketha okususelwa kubantu?
Ezinye izinhlelo zokusebenza namapulatifomu zinikeza abakhangisi amandla okulayisha okulindelwe noma uhlu lwamakhasimende ukufanisa abasebenzisi phakathi kwalokhu okubili. Uhlu lungalayishwa futhi luqondaniswe nabasebenzisi abangaphakathi kohlelo lwabazali olususelwe ngaphandle kwekheli le-imeyili. Ngemuva kwalokho umkhangisi angakhomba lezo zinhlu ngemikhankaso ethile.
Ngizithola ngiqonde ngqo kulezi zinwele eziwele. Ngisebenzisa umakhalekhukhwini wami ukuphenya ama-imeyili nezenhlalo, bese ithebhulethi yami ukuphendula kwabaningi, bese ngifika emsebenzini oyinhloko wekhompyutha yami ephathekayo. Lokhu, kunjalo, kuyinkinga enkulu kubakhangisi. Kusetshenziswa indlela ye-cookie-cookie, kunzima kakhulu ukuxhuma izinkwa zezinkwa bese ukhomba okulindelekile noma ikhasimende lakho kudivayisi ngayinye abayisebenzisayo.
Ngokusho kweNielson OCR Norms:
I-58% yesilinganiso esuselwe kukhukhi seqiwe
I-141% engezansi kwesilinganiso semvamisa kusilinganiso esuselwe kukhukhi
Ukunemba okungu-65% ekuqondisweni kwenani labantu kusilinganiso esuselwe kukhukhi
U-12% wokuguqulwa uphuthelwe ngesilinganiso esisuselwe kukhukhi
Yingakho ke ukumaketha okususelwa kubantu kuyanda. Esikhundleni sokumaketha kumakhukhi wesiphequluli nokuzama ukuxhuma amachashazi, inkampani ingalayisha amathuba ayo noma uhlu lwamakhasimende ngqo kungxenyekazi yokukhangisa bese ibhekisa kulabo basebenzisi kunoma iyiphi idivayisi. Akuyona into engenangqondo - abantu abaningi basebenzisa amakheli e-imeyili ahlukene phakathi kwezinkundla zabo zenhlalo nezinkundla zamabhizinisi. Kepha kunezinzuzo ezithile ezinhle ngaphezu kwezinqubo ezijwayelekile zokukhomba nokuhlukanisa izingxenye.
Isiginali kanye ne-Econsultancy kuhlolwe abathengisi bezimpawu abaphezulu abangama-358 baseNyakatho Melika kanye nabathengi bemithombo yezindaba ukuqonda umthelela nekusasa lezindaba ezibhekekayo ezinhlanganweni zabo. Sithole ukuthi abakhangisi bakulungele ukukhulisa ukutshalwa kwemali kwabo kuzisombululo zemidiya ezibhekekayo ezibopha ukukhangisa kwabo kumakhasimende angempela ngesikhathi sangempela, kubanika amandla okukhomba izikhangiso zedijithali ngokunemba nokuhambisana okwengeziwe. Ekugcineni, ukukhangisa okususelwa kubantu kuyisu labo lokunqoba izinselelo zomhlaba ophakathi kwamadivayisi.
Imiphumela iyamangalisa! Abakhangisi abangama-70% bachaze imiphumela yabo yokukhomba yeqembu lokuqala njengokuhle noma okulindelekile, ama-63% wabakhangisi babika amanani wokuchofoza athuthukisiwe, kanti ama-60% wabakhangisi ahlangabezane namazinga aphezulu okuguqulwa Nayi imininingwane egcwele evela ku-Signal:
Tags: ukucubungulaFacebookizilaleli ze-facebookabantu basedukukhangisa okususelwa kubantuukumaketha okususelwa kubantuisignaliTwitter
Amathuluzi Awenzi Umaki